Topy maso ny solosaiko | Martech Zone
Topy mijery ny solosainako
Tokony ho 6 taona lasa izay dia nividy karatra fahitalavitra ATI ho an'ny solosainako aho. Niasa tamina tetik'asa andavan'alina aho tamin'ny alina ka nandevina ny tenako tao amin'ny biraoko ary nahatratra fahitalavitra rehefa niasa. Talohan'ny andron'ny pikantsary roa io, saingy nahavita asa be io ary azoko jerena amin'ny efijery kely eo amin'ny zoron'ny birao.
Tsy niova firy ny fotoana milaza aminao ny marina… Efa niandry fotoana vitsivitsy nandritra ny fotoana fohy aho ary toa manaitaitra izao. Voalohany, nameno aho Fahitalavitra Demokrasia. Izy io dia niasa sahala amin'ny mpamaky sakafo ary nampahafantatra ahy izany Fahitalavitra Geekbrief… Mora kokoa ny mijery ny teknolojia geek raha miresaka momba an'io i Cali Lewis! Ny olana nifanohizako hatrany tamin'ny Demokrasia dia ny tsy fanarahana ny zavatra jerena sy ny tsy fahitana tsara. Vokatr'izany dia tsy hitako mihitsy izay fizarana nialako. Veloma veloma ny demokrasia.
Andro vitsy lasa izay, nahazo fanasana aho Joost. Oay! Nataoko izany ary nahagaga ahy avy hatrany. Ny fampiasana ny fampiharana dia miova eo amin'ny efijery feno, ny varavarankely ary ny fakan-tsary kely - mety sy azo eritreretina tsara. Ary koa, tiako ny isan'ireo singa amin'ny menio miseho sy manjavona amin'ny fifandraisana totozy voajanahary. Ny menus koa dia mampiasa fatratra ny opacity koa, mba hahafahanao manohy mijery sy mihaino ny fampisehoana any aoriana tsy misy fanelingelenana. Azo antoka fa ho lasa mpahazo ity.
Rehefa avy nanampy ny sasany namana miaraka amina tranonkala iray naorin-dry zareo ho an'ny mpanjifa, dia gaga ahy ry zareo tamin'ny AppleTV. Taitra aho tamin'ny fahalalahan-tanana… ary tany amin'ny lanitra geek. Nolazaiko azy ireo fa be loatra izany… ary tsy hamerina izany intsony aho. 🙂 Ny AppleTV dia tsy tena mijery televiziona amin'ny solosainao… toy ny hoe mijery solosaina amin'ny solosainao amin'ny solosainao ho an'ny fahitalavitrao ianao. Huh? Alao an-tsaina ny Ipod ho an'ny Televiziona ary mitovy amin'ny AppleTV. Ny interface dia toy ny fampiasana iTunes na iPod ary azonao atao ny mampifanaraka amin'ny PC-nao.
Ny tiako ho fantatra dia ny fomba ahafahako manary tsotra fotsiny ny tranomboky fampitam-baovaiko avy amin'ny tambajotram-pifandraisako amin'ny AppleTV nefa tsy mila manao syncing. Manana tranomboky mozika lehibe eo aho sy ny sarinay rehetra. Tsy te hanana azy ireo ao amin'ny tranomboky iTunes eo an-toerana aho… Te-hitondra azy ireo fotsiny aho. Ny zavatra hafa tsikaritro dia ny ahafahanao mifandray amin'ny fonosana iTunes tokana isaky ny mandeha. Tsy afaka miandry aho raha tsy voajirika ity… Te hampiasa ny AppleTV -ko ho tranomboky mozika zaraina ho an'ny ankohonana iray manontolo (2 Mac, PC 2). Tsikaritro izany efa nisy nijirika ny AppleTV hitantana OSX… Hmmm. Mijery foana aho Apple TV hacks.
Sa angamba i Joost dia hifandray amin'ny AppleTV? Iza no mahalala… honina mandritra ny taona vitsivitsy ny vovoka amin'ity fipoahana ity - saingy tsy andriko izay hahitantsika antsika.
Ny fidinana fantsona koa dia safidy fanampiny ho an'ny mpitety tranonkala. Soso-kevitra amin'ny satroka mankany Scoble, vao nandefa ny fanamoriana vaovao amin'ny fahitalavitra vaovao ny…… WOW. Ny famaritana dia tsy mampino ary ny interface tsara dia tsara. Raha azon'izy ireo natao ny nahazo fampisehoana vitsivitsy mendrika hijerena!
Tags: abc fahitalavitracali lewisteleviziona solosainademokrasia tvtv geekbriefjoostmivantana Videofahitalavitra
Riandrano vs. milina fanasana: fahitana ny fitantanana ny vokatra
Apr 8, 2007 amin'ny 10: 17 AM
wow .. milay be. Toa mampientam-po tokoa i Joost, toa tsy milatsaka amin'izao fotoana izao ny fisoratany beta .. fa mampinono.
Apr 8, 2007 amin'ny 10: 19 AM
Manana taratasy fanasana tokoa izy ireo, saingy mampalahelo fa fanasana 0 ihany no azoko! Fantatro fa nisy olona hafa afaka nanasa olona 5… fa tsy izaho, na izany aza. Raha miova io isa io dia azonao antoka fa hanampy anao aho!
Apr 10, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Vao avy nasain'i Joost aho, saingy hita fa tsy manohana ny Power PC ny rindrambaiko. Bugger!